Qaxootiga Dhadhaab oo beeniyey in ay Al-shabaab saldhigyo tababar ku leeyihiin xeryaha qaarkood – Radio Daljir
Oktoobar 3, 2013 4:45 b 0
Gaarisa, October 3, 2013 – Qaxootiga Soomaalida ah ee dalka Kenya gaar ahaan xeryaha Dhadhaab ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay war dhowaan ka soo baxay dowladda Kenya oo lagu sheegay in ururka Al-shabaab ay abaabulo ka sameeyaan xeryaha.
Xilibaano ka tirsan waaxda difaaca Baarlamanka Kenya ayaa dhowaan soo saaray war ay ku sheegayaan in ururka Al-shabaab ay weeraro ka fuliyaan Kenya, iyagoo saldhigyo tababar iyo dhalinyaro intaba ku leh xeryaha Qaxootiga dalka Kenya ee dhadhaab.
Madaxa guddiga amniga xeryaha qaxootiga Dhadhaab Shariif Cabdalla waxaa uu sheegay in ay been abuur iyo warar aan xaqiiq ahayn ay yihiin warka ay soo bandhigeen guddiga difaaca ee Baarlamanka dalka Kenya.
? waxaa jira dad dano gaar ah oo siyaasadeed wata isla markaasna abaabula falal amni daro ee ka dhaca xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, ma jiraan al-shabaab halkan jooga? ayuu yiri shariif Cabdalla.
Shariif cabdalla waxaa uu si cad u sheegay in weerarada iyo falal kasta oo amni daro lagu eedeeyo ururka Al-shabaab, balse aan la soo hadal qaadin dhinacyada kale ee falalka amniga lidka ku ah wada, kuwaas oo wata dano gaar ah oo siyaasadaysan.